यी ६ फलफूल जसले जाडोयाममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ Canada Nepal
May 10 2021 | २०७८, बैशाख २७गते
२०७८, बैशाख २७गते
झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणमुक्त, भने - सक्रिय रुपमा कामकाजमा फर्कनेछु
फिल्म 'राधे' को कमाईले अक्सिजनको सिलिन्डर र औषधी किन्ने सलमानको घोषणा
विश्वासको मत : नेपालको संविधानको पहिलो अभ्यास
पीएसजीसँग नेयमारले गरे नयाँ सम्झौता, एक साताको कति तलब पाउँछन् ?
ओली सरकारलाई विदा गरी देशलाई अग्रगामी निकास दिउँ - बाबुराम भट्टराई
गिनीको सुन खानीमा खसेको पहिरोका कारण १५ जनाको मृत्यु
केही दिनभित्रै बहुमतको नयाँ सरकार बन्छ - नारायणकाजी श्रेष्ठ
राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने
यी ६ फलफूल जसले जाडोयाममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
कार्तिक १९ २०७७
आउनुहोस् कोरोना कहर र जाडो मौसममा रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्छन् यी ७ फलफूलले :
आलुबखरा : यो फल एन्टिअक्सिडेण्ट गुणको मुख्य श्रोत हो। यस फलमा प्राण घातक रोग क्यान्सरसँग लड्ने गुणकारी पोषण तत्वहरु पाइन्छ। जाडो मौसममा यस फलको सेवन गर्दा निकै फाइदाजनक हुन्छ।
कार्तिक १९, २०७७ बुधवार १७:४४:४४ बजे : प्रकाशित
# रोग प्रतिरोधात्मक
मुला एक, फाइदा अनेक
काठमाडौँ। नेपालको खेतबारीमा सजिलै उमार्न सकिने मुला तरकारी र सलादको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। मुुलाका अनेक प्रजातिहरू छन् जुन आकार, रंग एवं उम्रिने लाग्ने समयको आधारमा फरक–फरक हुन्छन्। मुलाका केहि प्रजातिहरू तेल उत्पादनको गर्नका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
कतिपय मानिसहरुले मुलामा पाइने गुणकारी तत्व थाहा नपाई, यसलाई हे दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। यद्यपि, यसको फाइदा थाहा हुनेलाई यसले धेरै रोगहरूको उपचारमा औषधिको भूमिका खेल्दछ। आयुर्वेदमा मुलाकाबारे धेरै वर्णन गरिएको छ। यसको नियमित सेवनले पायल्स, उच्च रक्तचाप, मधुमेह देखि कफ र मृगौलालाई समेत फाइदा गर्छ।
बाडुल्की लाग्दा– यदि कसैलाई धेरै बाडुल्की लाग्ने समस्या छ भने यस्तो अवस्थामा मुलाको जुस बनाएर पिउँदा राहत पाउन सकिन्छ। अथवा सुकाएको मुलाको काडा पानी बनाएर १–१ घण्टाको अन्तरालमा ५० देखि १०० मिलिलिटर पिउँदा पनि बाडुल्की लाग्ने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ।
दाद तथा चिलाउने रोग – दाद तथा चिलाउने रोगका लागि मुला उपयोगी हुन सक्छ। यदि कसैलाई यस्तो समस्या छ भने मुलाको बियाँलाई कागतीको रसमा पिसी चिलाउने तथा दाद आएको ठाउँमा लगाउँदा यस्तो समस्याबाट निको हुन् सक्छ।
सुन्निएको ठाउँमा– मुला खाँदा सुन्निएको समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। सुन्निएको उपचार गर्नका लागि ५ ग्राम तिल र १ देखि २ ग्राम मुलाको बियाँ सेवन गर्दा सुन्निएको समस्या बिस्तारै निको हुँदै जान्छ। यसको सेवन दिनमा दुई देखि तिन पटक सम्म गर्न सकिन्छ।
४. पायल्समा हुँदा – पायल्सबाट पीडित भएकाले यसलाई काँचै सलादकोरुपमा सेवन गर्न सक्छन् भने यसलाई किच्याएर अचारको रुपमा खान सक्छन्। त्यसैगरी, मुलालाई जुस बनाएर पनि पिउँन सकिन्छ। यद्यपि, यसको जुस बनाएर पिउँदा चिकित्सकको उचित परामर्शको आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी, मुलाको जुसलाई संक्रमित भएको ठाउँमा पोलेको समस्यालाई ठिक पार्न पनि मद्दत गर्दछ।
५. आँखाको समस्या– आँखाको समस्या भएकालाई मुलाले चमत्कारिक ढंगले काम गर्दछ। आँखामा कुनैपनि समस्या आउँदा मुलाको रस बनाइ यसलाई गाजल लगाए जस्तो आँखा वरीपरि लगाउँदा शितलता प्रदान गर्नुका साथै आँखाको स्वास्थ्यलाई लाभदायक हुन्छ।
६. घाँटीको समस्याको लागि मुला – मुलाको ५ देखि १० ग्राम बिउँलाई पिसेर, मनतातो पानी दिनको ३–४ पटकसम्म पिउँदा घाँटीको समस्या ठिक हुने गर्छ। यसैगरी, यस्तो नियमित गर्नाले घाँटी पनि सफा हुन्छ।
७. खोकीको आयुर्वेदिक औषधि – मुलामा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट तथा एन्टीव्याक्टेरियल गुणका कारण यसले रुघा खोकीलाई पनि ठिक पार्दछ। तर, यसको उच्च प्रभावकारिता पाउन यसलाई बिहान वा दिउँसो सेवन गर्नुपर्दछ।
बैशाख ८, २०७८ बुधवार १६:०६:१३ बजे : प्रकाशित
अनुहारमा लगाउनै नहुने यी १० चिज
काठमाडौँ। घाँटीदेखि माथि नाक, मुख, आँखासहितका अङ्ग समेत टाउकाको अगाडिको भागलाई अनुहार भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान तथा परिचयका लागि अनुहारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनुहारले नै हो, मानिसको व्यक्तिवलाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने।
यदि व्यक्तिको अनुहारमा थुप्रै दाग, पोतो, डण्डीफोर छन् भने यसले उसको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर गर्ने गर्छ। यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो अनुहारलाई लिएर धेरै संवेदनशील हुने गर्छन्। जसकारण सामाजिक भेटघाटमा नजाने, एक्लै बस्ने, साथीभाइ नभेट्ने अनि अन्ततः डिप्रेसनको सिकार हुने गर्दछन्।
त्यसैगरी, यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन उनीहरुले चिकित्सकको परामर्श बिना अनेकौँ रसायन उक्त क्रिम, पाउडरदेखि लिएर अन्य थुप्रै घरेलु उपचारको सहारा लिन थाल्छन्। जसले अनुहारको छालालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा थुप्रै नोक्सानी पुर्याइरहेको हुन्छ।
जानिराखौँ अनुहारमा लगाउनै नहुने १० चिज
साबुन र स्याम्फू – साबुन र स्याम्फूमा सल्फेट भन्ने रसायानिक पर्दाथ पाइन्छ। यस पदार्थले फिज निकाल्ने काम गर्छ। यदि साबुन वा स्याम्फू अनुहारमा लगाइयो भने यसले अनुहारको चिल्लोपनलाई सुख्खा बनाउँछ । साथै अनुहारको चिल्लोपनालाई घटाई छालाको पीएचको मात्रालाई पनि गडबड गर्दिन्छ, जसले अनुहारको छालामा अन्ततः क्षति पुग्दछ।
धेरै तातो र चिसो पानी – अनुहारमा धेरै तातो पानी पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन। यसले छालामा भएको पिएच मात्रालाई कम गरी छालामा भएको चिल्लोपन वा मोइस्चरलाई पनि कम गर्दछ। जसले छाला सुख्खा र फुस्रो हुने गर्दछ। त्यसैगरी, धेरै चिसो पानी पनि अनुहारमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैले, अनुहारलाई मनतातो पानी वा ठिक्क चिसो पानीले मुख धुँदा उपयुक्त हुन्छ।
स्टेरोइड भएका क्रिम – बजारमा पाईने स्टेरोइड भएका क्रिम वा मल्हमहरुको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले यसले छालालाई पातलो बनाई मुखको छालालाई संवेदनशील बनाउँछ र रगतका नसाहरु देखिएर मुख रातो हुने गर्दछ । त्यसैले, स्टेरोइड भएका क्रिमहरु प्रयोग गर्दा धेरै सावाधानी अपानाउनु पर्ने हुन्छ।
कागती – घरेलु उपचार गर्न धेरै मानिसहरुले कागतीको रसलाई अनुहारमा लगाउने गर्छन्। कागतीको रसमा भिटामिन ’सी’ को मात्रा बढी हुन्छ र यसको रस मुखमा लगाउँदा यसले छालालाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ। जब कागतीको रस लगाएको अनुहार सूूर्यको प्रकाशको सम्पर्कमा आउँछ, यसले रियाक्सन गर्दै एलर्जी हुने गर्दछ। र यस्ता एलर्जीका दागहरु लामो समयसाम्म अनुहारमा बस्ने गर्दछ।
बडीलोसन वा बडी मोइस्चराइजर – बजारमा पाइने बडीलोसन तथा मोइस्चराइजर पनि अनुहारमा धेरै लगाउँनु हुँदैन। यी उत्पादनहरु विशेषगरी जिउँका लागि बनाइएको हुन्छ र यसमा भएका थुप्रै रासायनिक पदार्थले अनुहारको छालालाई जर्रो, सुख्खा बनाउँछ। जुन, छालाको लागि पनि त्यति फाइदाजनक हुँदैन।
नरिवलको तेल – विशेषगरी जसको छाला सुख्खा छ, उसले नरिवलको तेल लगाउनु केहि हद सम्म राम्रो पनि हुन्छ । धेरै छाला रोग विशेषगज्ञहरुले यसको सल्लाह पनि दिने गर्छन। तर, नरिवलको तेल मुखमा लगाउनु उत्तम मानिँदैन, विशेषगरी जसलाई डण्डीफोरको समस्या छ र जसको अनुहारको छालामा चिल्लोपन आउँछ, त्यस्ता व्यक्तिले नरिवलको तेल अनुहारमा लगाउनु हुँदैन। नरिवलको तेल अनुहारका लागि बाक्लो हुन्छ र यसले चिल्लोपन निस्कासित गर्ने ग्रंथीहरुलाई रोकिदिन्छ।
परफ्युम र हेयर स्प्रे – परफ्युम र हेयर स्प्रेमा पाइने केमिकलहरुले गर्दा मुुखको छालालाई असर गर्ने गर्छ। यसमा भएको झोल पर्दाथले छालाको तेल निस्कासित गर्ने ग्रथीहरुलाई ब्लक गर्दिन्छ र डण्डीफोरको समस्या भएका बिरामीहरुलाई नराम्रो असर गर्दछ।
पेट्रोलियम जेली – नरिवलको तेल जस्तै पेट्रोलियम जेली अनुहारमा लगाउनु त्यति उचित वा उपयुक्त हुँदैन। यसले नरिवलको तेल जस्तै अनुहारमा भएका तेल निकाल्ने ग्रन्थीहरुलाई ब्लक गर्दिन्छ र चिल्लो अनुहार भएका व्यत्तिहरुको लागि यसले नराम्रो असर गर्छ।
हेयर कलर – हेयर कलरमा एलर्जी गराउने तत्वहरु हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो आँखाको वरीपरी एलर्जी हुन्छ ।
टुथपेस्ट – टुथपेस्टमा पाइने रासायनिक पदार्थमा अनुहारको छालामा कालो दाग बनाउने पदार्थ हुन्छ। जुन लामो समयसम्म रहन्छ।
बैशाख ९, २०७८ बिहिवार १३:३७:२९ बजे : प्रकाशित
# अनुहारमा लगाउनै नहुने यी १० चिज
अत्याधिक पानी पिउनाले शरीरमा कस्तो साइड इफेक्ट देखिन्छ ?
काठमाडौँ। पानी एक रंगविहीन, स्वादविहीन र गन्धविहीन रसायनिक पदार्थ हो। यसले कुनै क्यालोरी वा जैविक पोषण प्रदान गर्दैन । तर, पनि यो सबै ज्ञात प्राणीहरूको जीवनको आधार हो। हरेक प्राणीहरूको जीवन पानीले नै धानेको हुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन प्रक्रियाहरूमा पानीले महत्त्वपूर्ण भूूमिका खेल्नेगर्दछ।
खानेकुराको पाचन प्रक्रियामा पनि पानीको प्रचुरमात्रा उपयोग हुन्छ। मानव शरीरको बोसो बाहेकको पिण्ड मध्ये लगभग ७२ प्रतिशत पानीले ओगटेको हुन्छ। शरीरले दैनिक कार्यहरू सहजरूपमा गर्न एकदेखि ७ लिटरसम्म पानीको आवश्यकता पर्छ।
जलवियोजनबाट बच्न दैनिक क्रियाकलाप, आद्र्रता, तापक्रमअनुसार फरक मात्रामा पानीको सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ। शरीरमा भएको पानी पिसाव, पसिना, दिसा र सास फेर्दा बाफको रूपमा बाहिर जाने गर्दछ। पानीले शरीरका कोशीकाहरुमा पोषक तत्व पुर्याउँछ । शरीरबाट विषाक्त पदार्थलाई हटाउँछ । आन्तरिक तापक्रमलाई नियमित गर्दछ। त्यसैले, राम्रो स्वास्थ्य कायम गर्न दिनमा पर्याप्त र उचित मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक छ ।
यद्यपि, दिनमा अत्यधिक पानी पिउँदा भने शरीरमा गम्भीर स्वास्थ्य जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैगरी, दिनमा कति मात्रामा पानी पिउनुपर्छ भन्नेमा स्वास्थ्य स्थिति वा अवस्था, उमेर, जीवनशैली र दैनिक आनीबानीमा निर्भर गर्दछ ।
दिनमा कति अन्तरालबीच पानी पिइन्छ, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। किनभने मिर्गौलाले प्रति घण्टा १ लिटर अतिरिक्त पानी निकाल्न सक्छ। छोटो अन्तराल वा अवधिमा ३ देखि ४ लिटर पानी पिउँदा हाइपोनाट्रेमिया हुने गर्दछ। यो एक यस्तो अवस्था हो, जब रगतमा सोडियमको स्तर धेरै कम हुन्छ।
यसका लक्षणहरुमा भ्रम, सुस्तता, टाउको दुखाई, थकान र कम ऊर्जा, वाक्वाकी लाग्नु, बेचैनी हुने समस्या हुन्छ। रगतमा सोडियमको स्तरबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या निकै घातक हुन सक्छ। पानीको अत्यधिक सेवनले मात्र होइन यस्तो समस्या निम्त्याउने, हाइपोनाट्रेमिया विभिन्न अरु कारणले पनि हुनसक्छ। यद्यपि, अत्याधिक पानी पिउँदा पनि यो समस्या देखिन सक्छ।
त्यसैगरी, पानीको अत्यधिक सेवन गर्दा पानीको लत पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि रगतमा सोडियमको स्तर खतरनाकरूपमा घट्छ। जसले थुप्रै स्वास्थ्य जटिलताहरु निम्त्याउन सक्छ। सोडियमको स्तर घट्दा मस्तिष्क, मिर्गौला लगायत अन्य अंगहरुमा समेत घात हुन सक्छ।
सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट हो, जसले पानी र शरीरमा अन्य पदार्थहरूको स्तर नियमित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले, आन्तरिक प्रणालीलाई सामान्य राख्न र दैनिकरुपमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नको लागि प्रत्येक दिन कम्तिमा २ देखि ३ लिटर पानी पिउन चिकित्सकहरु सिफारिस गर्छन् ।
बैशाख ९, २०७८ बिहिवार १६:४५:५७ बजे : प्रकाशित
ग्यास्ट्रिक, प्रोस्टेट क्यान्सरसहितका रोगीलाई अकबरे खुर्सानी अचूक औषधि
काठमाडौँ। अकबरे खुर्सानी नेपालमा खेती गरिने एक प्रकारको खुर्सानीको प्रकार हो । नेपालका प्राय सबै भू -भागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भए पनि अकबरे खुर्सानी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रो उत्पादन हुन्छ। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूमा यसको उत्पादन धेरै हुने गर्छ।
नेपालबाट अकबरे खुर्सानीको अचारजन्य परिकार बनाएर अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न मुलुक, अस्ट्रेलिया र मलेसिया लगायतका देशहरूमा निर्यात हुँदै आएको छ। साथै यो खुर्सानी ग्यास्ट्रिक तथा चिसो लागेका मानिसहरुको लागि औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुदै आएको पाइन्छ।
अकबरे खुर्सानीको फाइदा
पेन किलरको काम गर्ने - अकबरे खुर्सानी पेन किलरको काम गर्दछ। यसको तापले पेट दुख्ने समस्या तथा पेट भित्र भएका अन्य समस्याका लागि एक किसिमको दुखाइ मार्ने काम गर्दछ।
प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मद्दत् गर्ने - अकबरे खुर्सानीमा पाइने प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी र बीटा क्यारोटीन पाइन्छ। यसका साथै अकबरे खुर्सानीमा एन्टी ब्याक्टेरियल तथा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ, जसले गर्दा मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दछ।
पाचन प्रणाली तथा ग्यास्ट्रिकका बिरामीका लागि फाइदाजनक - नेपाली समाजमा अकबरे खुर्सानीलाई ग्यास्ट्रिकका बिरामी तथा पाचन प्रणाली औषधिको प्रयोग गरिने गरेको छ। यसमा पाइने विभिन्न गुणकारी तत्वले खाना छिट्टै पचाउन र पेटका अन्य समस्यामा पनि फाइदा पुर्याउँदछ। यसैगरी, यसले आँखा तथा तथा छालाको समस्या भएका मानिसलाई फाइदाजनक हुन्छ।
प्रोस्टेट क्यान्सरका लागि प्रभावकारी - पुरुषहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । एक शोधका अनुसार खानामा अकबरे खुर्सानी खाँदा प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बचाउने गर्दछ । अकबरे खुर्सानीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मधुमेहः अकबरे खुर्सानीले रगतमा भएको चिनीको मात्रालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा पाइने गुणकारी तत्वले मधुमेहको जोखिमलाई कम गर्छ।
बैशाख १४, २०७८ मंगलवार १३:०३:१२ बजे : प्रकाशित
# अकबरे खुर्सानी
# प्रोस्टेट क्यान्सर